Wax-soo-saarka wiishka baaldiga Shiinaha iyo warshada |Chinatown
Waxaan nahay bixiye mashiinada gudbinaya hadhuudh xirfad leh.Wiishka baaldiga taxanaha TDTG ee qaaliga ah waa mid ka mid ah xalalka ugu dhaqaalaha badan ee wax ka qabashada alaabta granular ama xumbada.Baaldiyadu waxay ku dhejiyaan suunka si toos ah si loo wareejiyo alaabta.Qalabka waxaa lagu quudiyaa mashiinka hoosta waxaana laga soo saaraa dusha sare.
Qalabkan taxanaha ah wuxuu la imanayaa awoodda ugu badan ee 1600m3 / h.Waxa si weyn loogu isticmaalaa habka kaydinta qamadiga, bariiska, iniinta geedka saliidda, iyo qaar ka mid ah badarka kale.Intaa waxa dheer, waxa kale oo loo isticmaali karaa sida mishiinka hadhuudhka ee warshadda daqiiqda, warshadda bariiska, warshadda calafka, iyo wixii la mid ah.
1. Wiishkan hadhuudhka ahi waxa uu si hufan uga fogaan karaa ururinta alaabta, waxa uu yarayn karaa jebinta khatarta ah oo waxa uu si habsami leh ugu bilaabaa baaldi buuxa iyo kabo 1/3 ka buuxa hadhuudh.Wiishka baaldigu si joogto ah ayuu u shaqayn karaa iyadoo ay xaaladdu buuxdo.
2. Qaybaha madaxa iyo kabaha mashiinku si buuxda ayaa loo rari karaa waxaana lagu rakibay taargooyin difaac u adkaysta xidhashada.
3. Albaabada kormeerku waxay ku yaalliin labada dhinac ee madaxa iyo qaybaha kabaha.
4. Suumanku waa ugu yaraan saddex lakab oo caag leh naylon laakiin sidoo kale waxay ku xidhan yihiin awoodda iyo dhererka wiishka.
5. Daboolka wiishka baaldiyada waxaa lagu rakibaa isku xirka flange ee gaasaska caagga ah, waxayna leeyihiin saxnaansho cabbir heersare ah iyo saxsanaan.
6. Dhammaan jilballada waa kuwo dheelli-tiran oo is-dheelli-tiran, waxaana lagu daboolay caag aad u sarreeya oo aan simbiriirixan lahayn.
7. Xadhkaha jiidashadu waa nooca isku toosan ee xawaaladaha safka labalaabka ah.Waa kuwo boodh adag oo lagu rakibay daboolka ka baxsan.
8. Habka la-qaadista wuxuu ku yaalaa qaybta boot ee wiishka baaldiga.
9. Waxaan isticmaalnaa sanduuqa qalabka tayada sare leh iyo mashiinka qalabka.Sanduuqa gear-ga nooca xiiran waxa uu la socdaa ilko adag oo si buuxda u xidhan, halka farsamada saliidda daadinta la qaatay.Sanduuqa qalabka SEW ee Jarmalka ayaa diyaar u ah inuu buuxiyo shuruudaha gaarka ah ee macaamiisha.
10. Qaybta badbaadada oo dhamaystiran waxaa loogu talagalay wiishka baaldigayaga.Shafka dabada kasta waxa lagu rakibay dareeraha xawaaraha iyo qaybta dambe ee joogsiga ayaa lagu rakibaa si looga ilaaliyo suunka in uu dib u dhaco haddii ay dhacdo koronto.
11. Baaldiyada birta ah ama baaldiyada polymeric ayaa diyaar ah.
Nooca Saamiga Gudbinta Xawaaraha (m/s) Awoodda (t/saac)
Bur Qamadi Bur (r=0.43) Qamadi (r=0.75)